लौ पढ्नोस्, ‘लौरो’को चमत्कार यात्रा : काठमाण्डौंहुंदै धरानसम्म ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०९:५१
भवानी बराल, धरान (सुनसरी)
यतिखेर घरघर, चोक, चौतारो र फलैंचामा लौरो वा लट्ठी कै चर्चा छ । आमसमुदाय, काठमाण्डु महानगरदेखि धरान उप–महानगरसम्म लौरो चुनाउ चिनोबाट आउने परिणामको पर्खाइमा छन् । यी दुवै शहरमा लौरोले राजनैतिक मान्यता पाएकोले सबैका आँखामा लौरोको लहर छ । पुलिसको कठबाँसको लौरोको स्वाद त धेरैले चाखेको हुनुपर्छ । गोर्खेलौरीको बारेमा आजका पुस्तालाई त्यति हेक्का छैन । जनताले यसपटक प्रतिकको रुपमा लौरो उज्याएका छन् । आउने चुनाउमा गोर्खेलौरी नै लगाए भने के होला ? यी प्रसंग प्रकाशित भैसक्ता धरानमा लौरो संस्थागत भैसकेको पनि हुनसक्छ । धरानकै नियती काठमाण्डुमा दोहोरियो भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ ।
लौरोको महिमा : धरान–काठमाण्डुमा
लौरो प्रतिकमात्र हो । तर, वर्तमानको स्थानीय चुनाउमा लौरोको परिणाम राजनैतिक उहापोहको नयाँ तर्क तरंग हो । लौरोमार्फत दूवैले अहिलेका दक्षिणपन्थीहरुलाई हानेको चाबुक हो । यी दुई पात्रहरु जताबाट सिँगारिएका हुन (यसमा हर्क राई चैं सम्मिलित छैनन) तिनले हानेको चाबुक वामपन्थसंग थोरबहुत सम्बन्धित छ । वालेनले जनवादी गीतको पृष्ठभूमिमा ‘¥याप’ हान्दा जुन समर्थन पाए । त्यसले प्रांगारिक वाम विचार र आधुनिक ¥याप धन्दा फ्युजन भयो । धरानमा काकाकुल बनाउने विरुद्ध हर्कराज जाइलागे । जलाधारको सुरक्षामा समर्थन, एमसीसीको विरोध, गिट्टी बालुवा माफियाको विरुद्ध लड्दालड्दै खप्पर फुटाए । हर्कको हर्ष बढाँइ गर्ने आधार यति नै हो । अर्थात दुबैको राजनैतिक कुलपुँजी माथि भने जति मात्रै हो । तर हात्ति पार्टीहरुलाई तिनका यति पुँजीले नै थला बसाए ।
गणेशमानको लौरो :
लौरोको कैरन गर्दै जाँदा गणेशमानको लौरोको प्रसंग पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छ । उमेर हदकाकारण गणेशमान सिंह लौरो लिएरै हिँडथे । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशलाइ भेट्न जाँदा पनि लौरोसंगै अमेरिका पुगे । सिंहको त्यो निर्जिव लौरो जिवित कार्यकर्ताको चिनारी पनि भयो । पञ्चायतकालमै काठमाण्डु नगर पञ्चायतमा उनले लौरो उठाए पनि जिताउँछौं भनेर उद्घोष गरे । नभन्दै गणेशमानको ‘लौरो’ हरिबोल भट्टराईले प्रधानपञ्चमा जिते । ठूलाठूला महापञ्चका सपना तुहिए । सिंहदरबारमात्र हैन नारानहिटी पनि थर्कियो । सिंहको लौरो त्यहीँदेखि प्रख्यात भयो । तर, आज तिनकै परिवारका सदस्यलाई लौरोले हावाकावा खेलाएको छ । संजोग लौरोकै कारण सिर्जना सिंहको आशामा तुषारापत भयो भने अनौठो हुने छैन । लौरो ‘जनलौरो’को कथा सार हुँदैछ ।
लौरोको प्रयोग :
यस पटक लौरो चुनाउ चिनोमा प्रयोग भएकोले मात्र प्रख्यात भएको हैन । लौरो आफैमा विलक्षण गुण भएको साधन हो । लौरोमा गीत साहित्य रचिएका छन् । लोक गायक गंगा वरदानको ‘कहाँमा काट्यौ बेतको लौरी, लङ्गुरैको वनैमा’ बोलको प्रख्यात गीत छ । अर्को ‘हिर्काउँला लौरीले ट्वाक्क ट्वाक्क’ बोलको गीत पनि छ । मधेसमा ‘जिसका लाठी उसका भैंस’ भन्ने उखानै छ । पहाडी वस्तीमा ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ भन्ने चल्तीको भनाई छ । तर यो भनाइलाई आजको राजनैतिक घटनाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बनाएको छ । यतिखेर अग्ला र हात्ति जत्रा पार्टीका मुखमा घोचो परेको छ ।
बुढापाका, लुला लंगडाको लौरो सहारा मात्र हैन । शान्ति सुव्यवस्थाका लागि पनि लौरोको जरुरत पर्छ । संसारभरका प्रहरीको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने लौरो नै प्रमुख र प्राथमिक साधन हो । शिक्षादीक्षामा पनि लौरोको प्राग ऐतिहासिक महत्व छ । शिक्षकको लौरो खाएर कर्णधार बनेका धेरै छन् । पुलिसको डण्डा खाएर नेता हुने योग्यता पाएका त्यत्तिकै छन् । गोठालोको लौरो पशुपालन कृषिकर्मको प्रमुख साधन हो । हलीको लौरो जोताइमा प्रयोग नगरे गोरुबाट काम लिन सकिन्न । अन्न चुटेर भण्डारन गर्ने उत्पादनदेखि भित्राउनसम्म त्यत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यात्रामा लौरोको महत्व त कहीरहनु पर्दैन । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा घोडचडी यात्री होस वा पैदल हिँड्ने यात्रीको साथी लौरो नै हो ।
बुबा–आमालाई टेकाउने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउने :
लौरो चुनाउ चिनो भएकाहरुले ‘बुबा–आमालाई टेकाउने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउने’ थिम (नारा) पनि बनाएका थिए । जेष्ठ नागरिकलाई लौरो दिएर टेकाउँछन की आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन आए दिन थाहा लाग्छ नै । तर, लौरो दुःखि पीडितको सहारा हुँदै हो । आततायीलाई तह लगाउने यन्त्र पनि हो । केही दशक अगाडि माओवादीले उरन्ठेउलाहरुलाई भाटा लगाएको प्रसंग पनि लौरो लगाउने कामसंगै सम्बन्धित थियो । अर्थात लौरोको महिमा अपरम्पार छ । लौरोको सनाखत यतिमै काफी हुन्न । यसका असंख्य पुरान र कथ्य हाल्न सकिन्छ । सायद हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि लौरो कैरन गरेर सक्तैनन् । बेत, बाँसको, कठबाँसको, घंगरुको वा अरु कुनै बुट्यानको लौरोको काम त्यहि हो । यसपटक त्यही साधनको चिनो प्रतिक स्वरुप जनताले जनलौरो, जनदण्डको रुपमा प्रयोग गरे । उम्मेदवार, चिनो पाउने पात्र मात्र हुन ।
हर्क–बालेन लौरो :
जनताले लौरो लगाएको यो नौलो नौतुन कुरा भने होइन । उहिले पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहाल (काठमाण्डु), पुहातु चौधरी (झापा), थर्के ढकाल (धरान) आदि पात्र उभ्याएर पञ्चायतलाई लौरो लगाएको घटना ताजै छ । पञ्चायत लौरो लागेर बौरिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । यस्ता लौरो खाएको केही बर्खमै पञ्चायतको इहलिला समाप्त भयो । धरान नगर त लौरो लगाउने मामिलामा धेरै अगाडि नै हो । त्यसैको निरन्तरता ‘थर्के लौरो’ अहिले धरानको ‘हर्के लौरो’ हो । बालेन लौरो नानीमैया लौरोको निरन्तरता हुनसक्छ ।
तर, लौरो पो पनि हेर्नका हुन्छन । उहिले नै उहिले धेरै नै पहिले भारी, बेसाहा बोक्दा डोको, थुन्से, ढाकरमा तोक्मा नामको चोके परेको बलियो लौरोको प्रयोग हुन्थ्यो । त्यतिबेला ढोडको तक्मा वा लौरो काम लाग्दैन भन्ने चलन थियो । यसरी नै सन्ठीको लौरो पनि काम लाग्दैन । ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ भन्ने त उखान नै छ । यस्तो लौरोको उपयोगिता हुन्न । सिमली, घंगरु, कठबाँस, बाँस, बेत आदिको बलियो लौरो मात्र काम लाग्छ ।
लौरो र गोर्खेलौरी :
लौरोको प्राग ऐतिहासिक परिचय दिनु लम्बेतान हुनेछ । यसर्थ लौरोको सामयिक परिचय नै यहाँ काफी हुन्छ । लौरो हातले समाई टेकेर हिँडिने बुटयानको हाँगो हो । लङ्गुरो र बेत, बाँस आदिको घोचो हो । यसलाई लहुरो, लट्ठी जे भनेपनि हुन्छ । र्लौरी चैं सानो लहुरो वा लहुरी हो । मधेस तिर लौरौको खेल शत्रु नास गर्ने अचुक उपाय हो । खड्गी समुदायले लौरोलाई साहित्य संस्कृतिको प्रतिक बनाएर लट्ठी नाँचमार्फत चाडबाडलाई रंगीन बनाउँदै आएका छन् । मधेसको चल्तिको उखान झैं यसपटक जिसका लाठी उसका भैंस चरितार्थ हुने क्रममा छ ।
गोर्खेलौरी आजका पुस्तालाइ त्यति जानकारी छैन । काँधमा र घुँडामुनी गरालो हालेर डोरीले बाँधी अपराधिलाई दिइने सजाय गोर्खेलौरी हो । अहिले आजका पुस्ताले हात्ति पार्टीलाई लाठो लगाएका मात्र हुन । आजका पुस्ताले गोर्खेलौरीको विषयमा जानकारी पाए भने त्यसो पनि गर्न बाँकी राख्ने रैनछन भन्ने यो सन्देश हो । गोर्खेलौरी नै लगाए भने हात्ति पार्टीहरु इन्तु न चिन्तु बनाउँछ । लौरो खाँदा भाग्ने, सच्चिने ठाउँसम्म हुन्छ । लौरोले सबक सिकाएको मात्र हो । गोर्खेलौरी लगाए भने ठूलै सकस हुनेछ । यति चेतना चैं आजै राखे कसो होला ?